Baarkinka & Macluumaadka Gaadiidka
Festival waxa uu ku yaalaa weheliyaan ah Mile Scioto, Saxiixa Columbus 'Xadiiqadda beerta webiga, ee ku teedsan buundooyinka Rich iyo Main Street iyo horteeda COSI, Xarunta Sayniska iyo Warshadaha.
Baabuur dhigashada mayl-weynaha scioto mile aad buu u badan yahay!
Isticmaal bogga internetka ee ParkColumbus ama abka bilaashka ah si aad u hesho garaashyada baarkinka ee dhow (oo meel u dhig), meelo badan, oo isticmaal badhanka "goobaha raadinta" si aad u hesho baarkin mitir ah. Fiiro gaar ah: Garaashyada Columbus Commons ee 55 S. Rich & 191 S. Saddexaad way fog yihiin (0.4 mayl) laakiin waxa laga yaabaa inay bixiyaan heerar hoose.
ISBEDEL MUHIIM AH OO KU SAABSAN BAARDHIINTA mitirka: Magaalada Columbus ayaa meesha ka saartay mitirada baarkinka waxayna ku bedeshay baarkinka mobilada iyo kiosk. Markaad dhigato baabuur waxaad ka bixin kartaa dukaanka kuugu dhow ama qalabkaaga gacanta adoo soo dejinaya midkood ParkColumbus app, fariinta "park" u direysa 77223 ama sawirida koodka QR, ee laga helay calaamada gudaha magaalada hoose, si aad online ugu bixiso.
App-ka ParkColumbus kaliya ma bixiyo hab sahlan oo wax lagu bixiyo balse wuxuu muujinayaa meesha baarkinku yaalo wuxuuna kuu soo diri karaa ogaysiis qoraal ah marka mitirkaagu dhamaado. Fadlan ogow in aan ku meel gaadh ah lahayn calamadaha baarkinka waa in la addeeco xiitaa hadii abka uu tuso aaga in la heli karo.
Kuwa wata boorarka baarkinka ee naafada ah, meelo calaamaysan ayaa laga heli karaa dhanka bari ee Civic Centre Drive inta u dhaxaysa Magaalooyinka iyo Wadooyinka Balaadhan.
ma u baahan tahay hab kale oo aad ku tagto feestada?
COTA waxa ay socon doontaa dhamaadka todobaadka oo dhan iyada oo joogsiyo ku teedsan High iyo Front Street oo dhan magaalada hoose. Qorshee jidkaaga ku yaal bogga COTA oo aad hoos ugu dhaadhacdo xafladda!
Waxaan la kaashanay Columbus Bike Valet si aan u bixino baarkin bilaash ah baaskiilka inta lagu jiro saacadaha xaflada. Baarkinka baaskiilka waxaa laga heli karaa 400 W. Meel qani ah, oo galbeedka ka xigta Masraxa Muusikada Maxaliga ah ee Weyn. Waxa kale oo jira baaskiilada CoGo ee Beerta Bicentennial.